नेपाल एयरलाइन्सका उडान गोलमाल,यात्रुले सास्ती पाए कम्पनीले घाटा खायो – Searchinnepal
Digital Marketing Dashain Offer
An infected person of Makwanpur die at Chitwan Medical College
Festivals like Indrajatra are the cultural Assets of Nepal: Prime Minister
An ambulance carryingapatient fell into the Trishuli River, injuring five people and seriously injuring one.
नेपाल एयरलाइन्सका उडान गोलमाल,यात्रुले सास्ती पाए कम्पनीले घाटा खायो
कुनै पनि एयरलाइन्समा जहाजको संख्या हेरेर उडान थप घट गरिन्छ। अर्थात् जहाजको संख्या घटेपछि नियमित उडानको कटौति वा जहाजको उडान समय बढाइन्छ। जसरी पनि व्यवस्थापन गरिन्छ। तर नियमित उडानमा रहेको एउटा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएर तीन दिनदेखि थन्किंदा समेत उडान तालिका व्यवस्थापन नगर्दा नेपाल एयरलाइन्सको एउटा उडान रद्ध हुन पुग्यो। जसको कारण दुवैतिरबाट यात्राको तयारीमा रहेका यात्रुले समयमै उड्न पाएनन् भने अर्कोतिर एयरलाइन्सले आर्थिक भार खेप्नुप¥यो।
सरकारी स्वामित्वको एयरलाइन्सले सोमबार मलेसिया जानको लागि आइतबार रातिको काठमाडौंबाट दुबई हुने भनिएको उडान अन्तिम समयमा आएर रद्ध ग¥यो। जसबाट दुबई उड्ने तयारीका साथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका यात्रुहरु रोकिएका थिए। त्यस्तै दुबईबाट काठमाडौं आउन तयार भएका यात्रुलाई पनि नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नै खर्चमा होटलमा राख्यो। एकातिर एयरलाइन्सलाई खर्चको भार अर्कोतिर गन्तव्यमा पुग्न आशमा रहेका यात्रुमाथि भावनात्मक ठेस। यो कुनै आकस्मिक कारणले सिर्जना भएको समस्या भने होइन।
एयरलाइन्सले जहाजको संख्या घटेको र कुनै विशेष इभेन्टको लागि भन्दै उडान नै नभएको दिनको लागि पनि टिकट काट्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको एयरलाइन्स स्रोतले जानकारी दियो। दुबईको उडान रद्ध हुनुको कारण अनौठो छ। पछिल्लो दिनको उडानको लागि अघिल्लो दिनको उडान स्थगित गरिएको छ। प्यासाफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसनको कार्यक्रममा जाने टोलीको अघि नै टिकट काटिएकोले अघिल्लो दिनको उडान स्थगन गरेको स्रोतको दावी छ। चार घण्टाको हवाईमा दुरीमा रहेको दुबई पुगेर एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौं आएर मलेसिया उडान गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि दुबईको उडान मनपरी रद्ध गरिएको एयरलाइन्सकै अधिकारीहरुको आरोप रहेको छ।
पर्याप्त पाइलट भएपनि निगम व्यवस्थापनले जहाज अभाव र त्यसको सेड्युल मिलाउन नसकेर रद्धको सहज बाटो रोज्यो। एयरलाइन्सका बरिष्ठ अधिकारीसमेत जाने मलेसियाको उडानका लागि दुबईमा नेपाल आउने भनर तयार भएका नेपालीहरु एकदिन पर्खनुप¥यो। यहाँनेर नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनको दुईवटा अलमल देखिएका छन्। जुन व्यावसायिक हिसाबले हुनै नहुने मानिन्छन्। पहिलो कुरा जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि उडान तालिकमा कुनै परिवर्तन नगरेर धमाधम टिकट बुक गरिरह्यो। जहाज घटेपछि सबैतिर उत्तिकै उडान हुँदैन स्वभाविक घटबढ हुन्छ तर एयरलाइन्स व्यवस्थापनले त्यसको कुनै हेक्का नराखी टिकट बुक गरिरहे।
दोस्रो कुरा नेपाल एयरलाइन्स आफै सदस्य रहेको पाटाको कार्यक्रममा जाने मिति यसअघि नै तय भएको थियो। उक्त दिन मलेसिया उडान गर्नुपर्छ भन्ने पनि एयरलाइन्स उच्च व्यवस्थापनलाई थाहा थियो तर त्यसको कुनै हेक्का नराख्दा रद्ध गर्नै नहुने ठाउँको उडान रद्ध गरियो। यदि व्यवस्थानले यी दुई कुरा बोध गरेको भए प्यासेन्जर सबैभन्दा कम भएको कुनै सेक्टरको उडान रद्ध हुनसक्थ्यो। यस्ताे अलमलले दुबई उड्नुपर्ने जहाज मलेसिया उड्याे यात्रुले सास्ती पाए एयरलाइन्सले घाटा खायाे। तर एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले चरासँग ठोक्किएर एउटा जहाज ग्राउन्डेड भएपछि उडान रद्ध भएको जानकारी दिए। यद्यपी उडान तालिक परिमार्जनमा अलमल भएको स्वीकार गरे। ‘एक्कासी जहाज घटेपछि उडान तालिक परिमार्जनमा केही अलमल भयो जसको कारण उडान रद्ध गर्नुप¥यो’ उनले सेतोपाटीसँग भने,‘तर कहिलेकाही उडान रद्ध हुनु सामन्य त सामन्य हो।’
कमजोरी भेटिए कारबाही हुन्छः मन्त्री अधिकारी
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले एयरलाइन्स व्यवस्थापनको कुनै पनि व्यक्तीले नियतबस उक्त कमजोरी गरेको पाइए सख्त कारबाही हुने बताए। उनले यसबारेमा सचिवलाई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निर्देशन दिइसकेको र कसैको कमजोरी भेटिए कारबाही हुने उनले जानकारी दिए।
नेपाल एयरलाइन्स संचाक बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेको मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले उडान हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उडान रद्ध भएको पाइएमा त्यसमा जिम्मेवार सबैलाई कारबाही गरिने बताए। ‘मैले त्यसदिनको पाइलटको व्यवस्था, उडान तालिक, अन्य उडानको अवस्था, जहाजको अवस्थाको बारेमा सबै जानकारी मगाएको छु त्यसमा कसैको नियतले उडान रोकिएको पाइएमा कसैलाई छोड्दीन’ देवकोटाले भने।
महिलाभन्दा पुरुष नै कोरोना सङ्क्रमणको बढी जोखिममा
काठमाडौंमा यो वर्षकै उच्च गर्मी, तीन दिन झरी नपर्ने
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, असार ७ गते आइतबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
विल गेट्सका सफलता सम्बन्धि भनाइहरु
सत्य बोल्नु, क्रोध नगर्नु, थोरै भएपनि दान गर्नु!
PREVIOUS POST Previous post: Local people to get shares of Solar Energy
NEXT POST Next post: आजको सुन चाँदीको मुल्य
Corona infection inayoung man who went to Nwaran’s party
Three more infected people undergoing treatment die in Birgunj
What is the progress of the Ministry of Tourism inayear?
Twenty-two people, includinga70-year-old woman, recovered from the corona infection and returned home
Woman undergoing plasma therapy Dies in Butwal
Another pregnant woman died in Corona, Bara, bringing the death toll to 16
Corona Confirmed in Eight People in Baglung
Youths in Siraha Starts ‘Food Bank’
Plasma Therapy A ‘Beam Of Hope’ In Treating COVID-19 Patients
Ex PM Madhav Kumar Nepal’s Security Team Confirmed Infected from COVID-19
Coronavirus pandemic could be over inside two years – WHO Chief
216 More COVID-19 Infected in Kathmandu Valley
Narayangadh Muglin Road blocked due to landslide
13.5 Billion Alread spent for COVID -19
Remdesivir is Now Available In Nepal To Treat Corona Virus Patients
Three Traffic Signals installed in Lalitpur
707 New COVID-19 Cases in Nepal
200 New Cases in Kathmandu
1200 People and 884 Vehicles held for Challenging Prohibitory Order In Kathmandu Valley
COVID-19 Update 16th August, 2020
Lockdown in Damak Area
Concerned towards government not resuming flights
Gatherings restricted in Budanilkantha
98 New COVID-19 cases seen on Kathmandu
Tribhuvan University not in hurry to comduct examination
Death Toll Due to COVID-19 hits 95 with4more on Thursday
Searchinnepal © 2020 - Designed By BfastMag Powered by WordPress